Maherivaratra Info. About. What's This?
13.500000°S 48.666670°E ﻿ / -13.500000; 48.666670
Maherivaratra dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Ambanja, Faritanini Antsiranana. Ny isam-poniny dia 4151 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 71921 ary ny kaodin-distrika dia 719
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia vary. Ny zava-bolena lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia noix de cachou. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia cafe. Ny isanomby dia 3224. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vary. Ny entana lafo vidy indrindra dia noix de cachou. 59 ny mponina no miasa tany. 40 ny mponina no miasa aminny fanjonoana. 1 ny mponina no miasa aminny sampandraharaha. 1100 no isanny kisoa.
Misy seranam-piaramanidina akaikinilay tanàna. Tongavanny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Andalovanny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona latsaky ny folo.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara maivana base. Ny faharetanny dia mankany aminny renivohi-paritany dia 2 ora. Ahitana lalana godorô ao aminny kaominina. Ny fotoam-pitaterana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 2 ora. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 30000 Fmg. Misy fikambananny mpampiasa lalan-tany ao. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny haintany dia 30000 Fmg.
5 isan-jatonny mponina no tena mahantra dia mahantra. 55 isan-jatonny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavanny vanim-potoana mety ahalanianny vokatry ny taon-dasa dia 3 volana. 10 isan-jatonny mponina no atao hoe manan-karena. 30 isan-jatonny mponina no manana fari-piainana antonontonony.